प’टक-पटक ट’न्सिलको स’मस्या देखिन्छ ? सामान्य नसोच्नुहो’स्, बि’गार्न सक्छ मु’टु - Nawalpur Dainik
प’टक-पटक ट’न्सिलको स’मस्या देखिन्छ ? सामान्य नसोच्नुहो’स्, बि’गार्न सक्छ मु’टु
मौ’सम परिवर्तनसँगै विभिन्न किसिमका सं’क्रमणले आक्रमण गर्ने गर्छ । सं’क्रमणका कारण श’रीरमा दैनिक स’मस्या आउँछ। जसले शरीरमा स’मस्या उत्पन्न भई दैनिक कार्य संचालनमा समेत बाधा निम्त्याउँछ । ट’न्सिलाइटिस पनि एक प्रकारको सं’क्रमण हो। जुन हाम्रो घाँ’टीमा हुने गर्दछ । प्राय गरी ट’न्सिलाइटिस विभिन्न किसिमका कि’टाणु तथा जी’वाणुहरुको सं’क्रमणले हुने ग्राण्डी अस्पतालका ना’क कान घाँ’टी रो’ग विशेषज्ञ डा. आन्नद घिमिरे बताउँछन् । ट’न्सिलाइटिस भएपछि घाँ’टी सुन्निने र दु’ख्ने गर्छ। यसले गर्दा खान पिउन गाह्रो हुन्छ र बोल्न पनि सहज हुँदैन । यसको जटिल पक्ष भनेको धेरै पटक सम्म ट’न्सिलाइटिस भयो भने मुटुको भल्व नै बिग्रने सम्भावना बढेर जाने भएकोले समयमै उपचार गर्न र सावधानी अपाउन डाक्टर घिमिरेको सुझाव छ ।
ट’न्सिलले हाम्रो शरीरको रो’ग प्रतिरोधात्मक प्र’णालीमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने गर्दछ। ट’न्सिलबाट लिम्फोसाइट र मोनोसाइट नामक दुई कोषको निर्माण हुन्छ जुन हाम्रो रो’ग प्रतिरोधात्मक क्षमताको महत्वपूर्ण अंश हो । यसका साथै ट’न्सिलले म्याक्रोकाज नामको कोष पनि निर्माण गर्दछ । यो कोषले श’रीरभित्र प्रवेश गरेका जीवाणुलाई नष्ट गरेर हामीलाई रो’ग लाग्नबाट बचाउँछ। कान दुख्ने, टाउको दुख्ने, सम्पूर्ण शरीर गलेको र दुखेको अनुभव हुनु, क’ब्जियत र पेट दु’ख्ने स’मस्या पनि तीव्र टन्सिलाइटिसमा देखा पर्न सक्छन् । मुखभित्र हेर्दा ट’न्सिलहरु सुन्निएका र रातो हुन्छ। कहिलेकाहीँ यी दुई ट’न्सिल बढेर झण्डै एक अर्कासँग जोडिन पुग्छ । जिर्ण तथा गम्भीर ट’न्सिललाइटिसमा समय समयमा घाँ’टी दुखिरहने, घाँ’टीमा केही अड्केको जस्तो अनुभव भइरहने, मुख मीठो नहुँने र स्वास गन्हाउने जस्ता ल’क्षण देखिन सक्छन् ।
ल’क्षणहरु: सुरुमा बिरामीलाइ घाँ’टीमा अप्ठ्यारो हुने । बिस्तारै ज्व’रो आउने । थुक निल्न नमिल्ने । खान पिउन अपठ्यारो हुने । ट’न्सिलहरु सुन्निएको र रातो रातो देखीने । पि’प बग्ने वा लिम्फमा तन्तुहरु सुन्निने र कडा हुने । ट’न्सिल भएपछि बच्चाहरुमा कान पाक्न सक्ने । घाँ’टीबाट संक्रमण कानको नलीमा सर्न सक्छ । ट’न्सिलाइटिसलाई राम्रोसँग उपचार नगरेमा दीर्घ प्रकृतिको रो’गमा परिवर्तन हुन्छ । बारम्बार घाँ’टीको संक्रमण भैराखेमा लिम्फोइड तन्तुमा सुक्ष्म पी’पहरु बग्न थाल्छ । नाक र साइनसको बराबर सं’क्रमण भएमा ट’न्सिलमा असर पर्छ, नाकको सिँगान वा अन्य रस अगाडि निस्कनको सट्टा पछाडिपट्टि बगेमा पनि यो हुनसक्छ ।
ट’न्सिलको उपचार कसरी गर्ने ? बिरामीले आराम गर्नुपर्छ र प्रशस्त झोल कुराहरु खानु पर्छ । चिसो पानी पिउनु हुँदैन । भिटामिन बि युक्त खानेकुरा खानुपर्छ । चिकित्सकको सल्लाह अनुसार औषधि सेवन गर्नुपर्छ । टन्सिलको अवस्था हेरी एन्टिवायोटिक समेत खानुपर्ने हुन्छ ।
रोकथाम तथा घरेलु उपचार: दैनिक रुपमा मनतातो पानीमा थोरै नुन मिसाएर मुख कुल्ला गर्ने । तातो पानीको बाफ लिने । मह मिसाएको मनतातो पानी तथा अन्य झोलीलो पदार्थ पर्याप्त सेवन गर्ने । घाँ’टीलाई असर पार्ने तत्वहरू जस्तै: धुवाँ, रसायन वा धुलो आदिबाट जोगिने । घरबाहिर निस्कँदा न्यानो कपडाले घाँटीलाई ढाक्ने र नियमित माक्सको प्रयोग गर्ने जसले धुलो, धुवाँको एलर्जीबाट जोगाउने गर्दछ । चिसो र फ्रिजमा राखेका खानेकुराका साथै चिल्लोयुक्त खाने कुराहरु कम खाने गर्नु गर्दछ ।
Nextजे गर्दा पनि चाँ’या गएन ? उसो भए एक पटक नु’नको प्र’योग गरेर हेर्नुहो’स्